‘फोहोर उठेन चिन्ता नलुनु होस्, पैसा नै तिरेर फोहोर लिन आउ छन्’ – Gandaki News
पोखरा, ५ चैत/ घरमा नकुहीने फोहोर छ ? फोहोर कहाँ फाल्ने भएको छ ? फोहोरलाई तपाई मोहरमा बदल्न सक्नु हुनेछ । पोखरा महानगरपालिका १६ अर्मलामा ग्रीन भ्याली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले फोहोरलाई मोहर दिएर संकलन गरी रहेको छ । फोन गरेर आफ्नो घरमा भएको नकुहीने फोहोर दिन सक्नु हुने छ ।
नकुहिने फोहोर पैसा दिएरै तपाइको घरबाटै उठाउछौ।
कृपया ९८५११९३५६२ मा सम्पर्क गर्नुहोस र फोहर लिन आउन समय लिनुहोस।
हामी सक्दो‌‌ उहि दिन नभए अर्को‌दिन तपाइकहा फोहर लिन आउने छौ।
पोखरामा सेती खोचमा खसेका युवाको उद्धार